Keating “Waxii Gaalkacyo ka dhacaa xisaabtan ayaa ka dambeeya, waana in hishiiska la dhowraa” | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Keating “Waxii Gaalkacyo ka dhacaa xisaabtan ayaa ka dambeeya, waana in hishiiska...
Keating “Waxii Gaalkacyo ka dhacaa xisaabtan ayaa ka dambeeya, waana in hishiiska la dhowraa”
Galkacyo (INO)— Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa ugu baaqay maamulada Galmudug iyo Puntland iney dhowraan hishiiskii magaalada Gaalkacyo ee lagu dhameynayay dagaaladii magaalada ka dhacay.
Mr Keating, wuxuu sheegay in madaxda labada maamul ay balanqaadeen iney dhowrayaan hishiiskii magaalada lagu gaaray, isagoo sheegay iney muhiim tahay ka dhabeynta balanqaadyada ay sameeyeen.
Labada Madaxweyne ayuu ugu baaqay ineysan markale magaalada kusoo laaban dagaaladii dhacay, ayna ku dadaalaan sidii dagaaladaasi markale looga baaqdan lahaa.
Dhinaca kale wuxuu sheegay in labada Maamul lagula xisaabtami doono waxyeelada ka dhalatay dagaalada muddada ku dhow afarta isbuuc ka socday magaalada Gaalkacyo, sida uu hadalka u dhigay.
Labada madaxweyne ayaa hishiis kale ku gaaray magaalada Gaalkacyo, kadib dagaal muddo maalmo ah qaatay oo ka dhacay Galbeedka magaalada Gaalkacy
Previous articleMaanta oo ah Maalinta Cudurka Sonkorowga Caalamiga ah
Next articleAMISOM oo sheegtay in bixitaanka ciidamada Ethiopia dhibaato u keeneyso howlgalkooda